San Miguel de Escalada, firavaka alohan'ny Romanesque any León | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | | kolontsaina, mpitarika
San Miguel de Escalada no iray amin'ireo lehibe tsangambato mialoha romana avy amin'ny faritanin'i León. Monasitera natokana tamin'ny 913 izy io handraisana ireo moanina avy Cordova, fa amin'izao fotoana izao ihany ny fiangonana ary fiankinan-doha hafa.
Any amin'ny tanànan'i Gradefes, fito kilometatra eo ho eo miala ny renivohitr'i León sy ny Làlan'i Santiago. Ny monasitera dia naorina teo amin'ny fiangonana taloha Visigoth natokana ho an'i San Miguel. Raha te hahalala bebe kokoa momba an'io firavaka alohan'ny Romanesque io ianao dia manasa anao hanohy hamaky.
1 Tantaran'i San Miguel de Escalada
2 Mampiavaka ny San Miguel de Escalada
2.3 Ny haingo
3 Ny codex an'ny San Miguel de Escalada
4 Ahoana ny fomba hahatongavana any San Miguel de Escalada
Tantaran'i San Miguel de Escalada
Tamin'ny taona 912, vondrona moanina notarihin'i Abbot Alfonso no tonga tao amin'ity faritr'i León ity. Tapa-kevitra ny hijanona ao izy ireo, ka nanangana monasiteran'izy ireo tao anatin'ny herintaona monja, izay efa tamin'ny 913, nohamasinin'ny eveka Masindahy Genadius any Astorga.
Ho fananganana azy ireo dia nanararaotra fitaovana tamin'ny fananganana Visigothic taloha izay noresahinay izy ireo. Mbola hita io eo amin'ny rindriny iray, izay ahitanao soratra avy amin'ny tempoly voalohany. Amin'ny lafiny iray, ny monasitera dia niaina ny vanim-potoana nahavitany tamin'ny taonjato faha-XNUMX, tamin'izany fotoana izany dia nasiana singa fananganana vaovao.
Efa ao amin'ny XIX, miaraka amin'ny Confiscation naterak'i Mendizábal tamin'ny fananana ara-piangonana dia nilaozana i San Miguel de la Escalada. Na izany aza dia nisy famerenana amin'ny laoniny maro ary, hatramin'ny 1886, dia nanambara Tsangambaton'ny firenena.
Portico an'ny San Miguel de Escalada
Mampiavaka ny San Miguel de Escalada
Araka ny efa nolazainay, ity fananganana ity dia mamaly ny toetran'ny zavakanto mialoha ny romana. Izany hoe, amin'ilay zavatra asehon'izy ireo Santa Maria del Naranco o San Miguel de Lillo ao Oviedo. Amin'ny ankapobeny, izy io dia mampifangaro ireo singa Visigoth amin'ireo singa Mozarabika hafa.
Na izany aza, aleon'ny manam-pahaizana ankehitriny miantso azy io restocking art. Ny antony, araka ny efa noeritreretinao azy, dia ny nataon'ny Kristiana izay nanorim-ponenana tao amin'ny tanin'ny Castile nilaozan'ny Silamo hamerina hipetraka azy ireo. Saingy, satria ireo faritra sisin-tany ireo dia mitondra fifandraisana hatrany, ity fomba ity koa dia manana matanjaka singa mozarabic, izany hoe, mitovy amin'ny an'ny Kristiana fa avy amin'ny faritany fananan'i Al-Aldalus.
Etsy ankilany, araka ny efa noresahintsika ihany koa, ny vohitra San Miguel dia nahazo fanitarana maromaro taorian'ny fotoana nananganana azy. Anisan'ireo voatahiry ny tilikambo romana lehibe tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay manjaka ny tapany atsimo amin'ilay sarotra.
Saingy, amin'ireo ampahany amin'ny fananganana izay voatahiry ankehitriny, ny fiangonana no singa lehibe indrindra. eFA fototra basilica ary mizara telo naves izy io, ary avy eo, dia sarahina amin'ny arches an'ny nentin-drazana tohanan'ny soavaly Silamo. Toy izany koa, eo anelanelan'ny naves sy ny lohan'ny tempoly dia misy toerana mitohy izay miasa toy ny transept ary ho natokana ho an'ny klerjy amin'ny fombafomba izy io.
Amin'ny ampahany, manana ny lohateny apses telo fa boribory semika amin'ny ao anatiny, fa mahitsizoro ivelany. Ho fanampin'izany, voasaron'ny tranokala galona mitovy amin'ireo hitanao any amin'ny moske Arabo maro.
Eo anelanelan'ny transept sy ny loha dia misy a iconostasis noforonin'ireo andry miendrika lakroa izay, tao amin'ny litorjia Hispanika, dia nanafina ny pretra tamin'ireo mpino nandritra ny fanamasinana. Izany dia fombam-pivavahana notazonina tao amin'ny litorjia peninsular mandra-pahatongan'ny Romanina nanjary tamin'ny taonjato fahiraika ambin'ny folo. Ny iconostasis dia singa maritrano izay nanome izany tsiambaratelo izany. Raha ny mahazatra dia efijery voaravaka volavola ara-pivavahana napetraka teo alohan'ny alitara izy io. Nanomboka nampiasaina tao amin'ny tempolin'i Byzantine izy io, avy teo amin'ny toerana nandalovany hatrany Andrefana.
Antsipiriany momba ny tohin'ny soavaly an'ny San Miguel de Escalada
Raha ny ivelany, ny tempoly dia tsy manana portico mandroso, zavatra mahazatra any Asturian pre-Romanesque. Ny fidirana dia sisin-tany sy ny ilany andrefana. Ny marina, amin'ny lafiny atsimo amin'ny fiangonana dia misy a galerie misy arcade miaraka amin'ny tohanan'ny soavaly izay manatsara ny iray manontolo. Ity singa manorina ity, somary taty aoriana satria natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX, dia mahazatra ihany koa ny tempolin'i Asturian ary ampiasaina betsaka any maritrano romana.
Mikasika ny fanazavana ny fiangonana, dia manaraka ny toetran'ny tempoly kristiana voalohany koa izy io. Noho izany, tratra miaraka am-baravarankely kely amin'ny rindrina misy ny nave lehibe sy ny apses. Farany, ny tafo dia tohana amin'ny dingana roa ary manana hantsana misy elanelana malalaka.
Io no singa fananganana farany nampiana tao amin'ny kompania San Miguel de Escalada, hatramin'ny taonjato faha-XNUMX. Manana vodin-matevina izy io ary nisy rihana telo tany am-boalohany. Ny atitany dia miditra amin'ny vavahady misy andohalambo semicircular izay mitondra anao mankany Chapel of San Fructuoso, fantatra koa amin'ny hoe Pantheon of Abbots.
Fa manasongadina indrindra ny varavarankely misy soavaly soavaly indroa. Mahaliana ny fisiany satria Romanesque ilay tilikambo. Noho izany, io karazana tsipìka io dia tsy nampiasaina intsony. Raha natao izany dia natao hanahaka ilay hita tany amin'ny faritra andrefan'ny tempoly.
Ary farany, ny firavaka an'i San Miguel de Escalada dia manankarena tokoa amin'ny fotoany. Izy io dia misy kapitaly, frieze, lattices ary varavarana. Raha ny antony manosika azy ireo dia be ny legioma. Ohatra, fehezam-boninkazo, ravina ary hazo rofia. Fa misy ihany koa ireo geometrika hafa toy ny randrana na ny meshes sy ny biby, toy ny vorona manintona ny sampahon'ny voaloboka.
Ny codex an'ny San Miguel de Escalada
Manodidina ny taona 922, ny abbot Victor, ao amin'ny monasiteran'ny Leonese izay misy ifandraisany aminay, dia nandidy ny hamoronana kaody izay handika ny 'Fanehoan-kevitra ao amin'ny Bokin'ny Apôkalipsy' avy amin'ny Beatus an'i Liebana. Ny vokany dia ilay antsoina hoe 'Notahin'i San Miguel de Escalada', natolotry ny jiro manazava Magius. Na izany aza, ity codex ity dia toa tsy natao tao amin'ny monasiteran'i Leonese, fa an'ny an'i San Salvador de Tábara, miorina ao amin'ny tanànan'i Zamora manana an'io anarana io ihany. Amin'izao fotoana izao, ny 'Beato de San Miguel de Escalada' dia voatahiry ao amin'ny Tranombokin'i Morgan avy ao New York.
Miverina amin'ny tempolin'i Leon
Ahoana ny fomba hahatongavana any San Miguel de Escalada
Ity tsangambato ity dia misy, araka ny efa nolazainay, tao amin'ny tanànan'ny Leonese an'ny Gradefes. Ny làlana ihany no ahatongavana any amin'ny tsangambato. Manana bisy avy any amin'ny renivohi-paritany ianao, saingy tsy dia matetika loatra. Ny torohevitray dia ny hidiranao ny fiaranao manokana.
Mba hanaovana izany León, tsy maintsy raisinao ny N-601 izay mampifandray ny tanàna amin'i Valladolid. Amin'ny haavo Villarente dia mila mandray ny LE-213 izay hitondra anao any amin'ny Gradefes. Saingy, alohan'ny hahatongavanao amin'ny renivohitry ny tanàna dia mila mandray a fiviliana ankavia manambara ny monasitera.
Ho fehiny, San Miguel de Escalada Izy io dia iray amin'ireo trano lehibe talohan'ny Romanesque amin'ny Castile rehetra. Mifandraika amin'ireo mpiara-belona aminy Asturianina, ny hatsaran-tarehiny dia tsy hamela anao tsy hiraharaha. Mandrosoa ary mitsidika azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » kolontsaina » San Miguel de Escalada
Castilians honina amin'ny tany resy indray? Tranobe Castilian? Tsy nisy koa Castilianina nonina tamin'ireo tany ireo, ary tsy trano Castilian koa tompoko. Ity no León, faritra iray any León fa tsy Castilla. Raha hanarina ny famoahana anao ianao dia ho feno fankasitrahana ny mponin'i León. Leo be an'ireo anarana mitohy izahay, tsara izany.
Rehefa natsangana i San Miguel de Escalada, dia faritany iray ao amin'ny fanjakan'i León i Castilla, ka ireo moanina Andalosiana izay nonenan'izy ireo dia tao León. Androany, ity tranobe ity dia miorina ao amin'ny faritra León, Castilla y León, araka ny tondroin'ny anarany, dia misy faritra roa. Ka ny monasitera dia tsy ary tsy Castilian.
Ho fanampin'ny tsy fahatanterahana ara-tantara sy ara-javakanto (na dia tsy nanondro azy ireo aza aho) dia mampangitakitaka fa na ny Beato de Escalada (vatosoa tena izy) aza tsy voatonona, anio ao amin'ny tranomboky sy tranombakoka Morgan any New York.
Valdabasta dia hoy izy:
San Miguel de Escalada no tanànako ary ao León! tsy any Castilla! Tianao ve ny manitsy fa tsy manoratra hadalana toy izany.
Mamaly an'i Valdabasta